Saamayn intee la’eg ayay leedahay isa soo dhiibitaanka Rooboow? - BBC News Somali
Saamayn intee la’eg ayay leedahay isa soo dhiibitaanka Rooboow?
Image caption Abuu Mansuur Rooboow wuxuu ahaa ku xigeenka hoggaamiyaha Alshabaab
Mid ka mid ah hoggaamiyeyaashii ugu caanka sanaa kooxaha hubeysan ee dowladda Soomaaliya kasoo horjeeda ayaa laga dajiyey magaalada Muqdisho kadib markii uu dowladda isu soo dhiibey.
Sheekh Mukhtaar Rooboow Abuur Mansuur ayaa laga soo duuliyey magaalada Xudur halkaasi oo isaga iyo ciidamo la socda ay soo magangaleen ciidamada dowladda kadib markii weeraro isdaba-joog ah ay ku qaadeen dagaalyahanada Alshabaab oo ka warheley wadahadalo la sheegey in ay u socdeen isaga iyo dowladda.
Waa kuma Rooboow?
Sheekh Mukhtar Robow wuxuu ka mid yahay aasaasayaashii ururka Al-Shabaab oo in ka badan 10 sano ka dagaallameyso Soomaaliya.
Wuxuu ahaa taliye ku xigeenkii Midowgii Maxaakiimta oo 2006-dii ka adkaaday isbeheysigii dagaal oogayasha Muqdisho.
Wuxuu noqday afhayeenka iyo ku xigeenka kooxdan, 2007-dii, isaga oo ka hadli jirey fagaarayaasha dadka la'isugu keeno iyo waliba saxaafadda.
Laakiin waxaa loo arkay in Rooboow uu xagga aragtiyada ka dabacsanaa hoggaamiyeyaashii kale ee mayalka adkaa ee Alshabaab, islamarkaasina ay ku jirtey waddaniyad sida la sheego.
Waxaa xitaa la sheegey in uu Rooboow ka qeybgalay shirkii Asmara ee la'isugu geeyey siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Shariif Xasan Sheekh aadan oo markii dambe dalka madax ka noqdey.
Rooboow iyo Alshabaab
Khilaaf iyo madmadoow ayaa soo kala dhexgalay Abuu Mansuur iyo hoggaanka kale ee Alshabaab, waxaana la sheegey in go'aamo badan uu kaga horjeedsaday amiirkii Alshabaab ee dhintey Abuu Zubeyr.
Abuu Mansuur waxa uu waligiisba haystay ciidamo u daacad ah oo beeshiisa u badan , isku gobolna ay kasoo jeedaan, kuwaasi oo isaga daacad u ahaa.
Iyada oo ay xaaladda sidaasi tahay ayuu ururka kasii mid ahaa, kana qeybgali jirey dagaalada iyo weerarada ay qaadaan, balse markii lasoo gaaray sanadkii 2013-kii ayay si toos ah isugu dhaceen Rooboow iyo hoggaankii sare ee Alshabaab.
Waxaa dhacday in Rooboow uu ciidamadiisa oo boqolaal ahaa dhinac ula goysto , kadibna galay dhulka miyiga ah ee Bay iyo Bakool, halkaasi oo uu kasoo jeedo, islamarkaasina si fiican u kala yaqaano deegaan ahaan iyo dad ahaanba.
Image caption Sheekh Xasan Daahir Aweys
Inkasta oo Alshabaab ay weerartay, qaarna dishey dhammaan hoggaamiyeyaashii ay kala aragti duwanaadeen sida Sheekh Ibraahim Xaaji Jaamac Meecaad (Afghan), Abuu Mansuur Al-Amriiki oo labaduba la diley iyo Sheekh Xasan Daahir Aweys oo naftiisa la baxsaday, ayaysan jirin weerar rasmi ah oo lagu qaaday Rooboow, sababta ay dooniba ha lahaatee.
Maxay oga dhigantahay dagaalka ka dhanka ah Alshabaab?
Laakiin ciddina kuma doodi karto in Alshabaab ay baaba'day, wali wax aka tirsan kumanaan dhalinyaro dagaalyahano ah, waxayna awood u leeyihiin in ay qaraxyo iyo waliba weeraro ka geystaan magaalooyinka waaweyn ee dalka.
Balse awoodooda sii wiiqmaysa iyo dadaalka ay dowladda ku jirto ee ay ciidamada ku dhiseyso ayaa muujin kara in hadda loosoo dhowaaday dhammaadka jiritaanka Alshabaab.